စာယာန စာနယာ - ဝီကီပီးဒီးယား
စာယာန စာနယာ (ထိုင်း: สายัณห์ สัญญา) ထိုင်းမူထူးခြားတဲ့စတိုင်အသံတဲ့သူဟောင်းတစ်ဦးရိုးရာအဆိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂီတ, ထာဝရဖြစ်ပါသည် ကြောပိတ်ဆို့မှု, ထိုင်း, ဆယ်စုနှစ်သုံးခုများအတွက်ဂီတများစွာ။ မှာမွေးဖွား ၃၁ ဇန္နဝါရီလ ၁၉၅၃ ပေါ်တွင်အသေခံ ၁၁ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၃
↑ ไทม์ไลน์ ลำดับอาการป่วย-การรักษาตัวของ 'สายัณห์' ก่อนเสียชีวิต Archived 1 June 2017 at the Wayback Machine. วอยซ์ทีวีออนไลน์
↑ เคลื่อนศพ'สายัณห์'สวดอภิธรรมวัดป่าเลไลย์ – คมชัดลึก 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556။ 2018-01-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စာယာန_စာနယာ&oldid=685223" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။